LS Automotive Group Myanmar (GAC Motor Myanmar) ၏ ဒုတိယမြောက် Mandalay Showroom ဖွင့်လှစ် - Myanmar Automobile and Equipment Directory
LS Automotive Group Myanmar (GAC Motor Myanmar) ၏ ဒုတိယမြောက် Mandalay Showroom ဖွင့်လှစ်
LS Automotive Group Myanmar (GAC Motor Myanmar) ၏ ဒုတိယမြောက် Showroom ဖြစ်သည့် GAC Motor Mandalay Showroom ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ထူးခြားဆန်းသစ်မှုများ ဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် All New GS5Model နှင့် All New GM6Model တို့၏ Soft Launch အခမ်းအနားများ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၊ ၂၈ ရက် ၊ သောကြာနေ့ ၊ ညနေ ၆ နာရီ ကကျင်းပခဲ့ပါသည်။
Mandalay Showroom သည် No. ( Sa – 1 /3+4) ၊ မြို့သစ် ( ၂ ) ရပ်ကွက် ( ၇၂ ) နှင့် ( ၇၃ ) လမ်းကြား ၊ ငုရွှေဝါလမ်းမကြီး ၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၊ မန္တလေးမြို့တွင် တည်ရှိပါသည်။
Soft Launch အနေဖြင့် All New GS5All New GM6ကားအသစ် (၂) မျိုးမှာ ကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ GAC All New GS5သည် Sporty SUV ဖြစ်ပြီး အထူးသစ်လွင်လှပသည့် ဒီဇိုင်းဖန်တီးမှု အသစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် ခရီးသည် (၅) ယောက်စီး SUV ပုံစံဖြစ်သည်။ All New Model ဖြစ်သည်နှင့်အညီ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည့် (1 .5T Engine) ၊ (150 hp) အင်ဂျင်စနစ် ၊ လုံခြုံမှုအဆင့်မြင့်မားသည့် High – Strength Steel ကားကိုယ်ထည်ဖန်တီးမှုနှင့် အတူ နည်းပညာ သုံးပါဝင်မှုများ ကြွယ်ဝံ့စွာပါရှိသည့် Model ဖြစ်ကာ Sporty မောင်းနှင်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည့် GAC ချစ်သူများအကြိုက်နှင့် ထပ်တူကြမည့် ကားလည်းဖြစ်ပါသည်။ All New GS5သည် ကမ္ဘာကျော် (C – NCAP) ၏ (5 star Safety Award) ဆွတ်ခူးရရှိထားသည့် Model လည်းဖြစ်ပါသည်။
GAC All New GM5သည် မိသားစုသုံးအတွက် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့်ခံစားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့် MPV Model ဖြစ်ပြီး မြို့တွင်း နယ်ဝေးအသုံးပြုမှုများအတွက် သင်နှင့် သင့်မိသားစု တို့အား ဘေးကင်းလုံခြုံ စိတ်ချမှုနှင့်စိတ်လက်အပန်းဖြေခြင်းများကို ခေါ်ဆောင်စေမည့် ကားတစ်စီးပင် ဖြစ်ပါသည်။ All New GM5တွင် ကျယ်ဝန်းသပ်ရပ်သည့် ခရီးသည်( ၇ ) ယောက်စီးပုံစံ ၊ စွမ်းဆောင် ရည်မြင့် ( 1.5 T Engine ) ၊ ( 169 hp ) အင်ဂျင်စနစ်နှင့် အတူ ထူးခြားသည့် ပါဝင်မှုများစွာကို ထည့်သွင်းထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ All New GM5သည် ကမ္ဘာကျော်( C - NCAP ) ၏ (5Star Safety Award ) ဆွတ်ခူးရရှိထားသည့် Model လည်းဖြစ်ပါသည်။
LS Automotive Group Myanmar (GAC Motor Myanmar)